UWilfred Owen - I-Biography
UWilfred Edward Salter Owen
Wazalwa: 18 Matshi 1893 e-Oswestry, eBritani.
Wafa: 4 Novemba 1918 kwi-Ors, eFransi.
Ubume be-Wilfred Owen's Life
Umlobi onobubele, umsebenzi kaWilfred Owen unikeza inkcazo ecacileyo kunye nokuhlaziywa kwimeko yamajoni ngexesha leMfazwe Yehlabathi . Wabulawa ekupheleni kombambano.
Ulutsha lukaWilfred Owen
UWilfred Owen wazalwa ngoMatshi 18th 1893, kwintsapho ebonakala ngathi iyityebi; Nangona kunjalo, engaphantsi kweminyaka emibili, umkhulu wakhe wafa esecaleni lokutshatyalaliswa, kwaye, elahlekelwa inkxaso yakhe, intsapho yaphoqelelwa kwizindlu ezihluphekayo eBirkenhead.
Isimo esiwa phantsi sishiya ingqalelo ngonaphakade kumama kaWilfred, kwaye mhlawumbi idibanise nokuhlonela kwakhe ukuvelisa umntwana onengqiqo, onzulu, kwaye ngubani owayenzima ukulinganisa amava akhe emfazwe ngemfundiso yobuKristu. U-Owen wafunda kakuhle kwizikolo zaseBirkenhead kwaye, emva kwesinye intsapho, u-Shrewsbury-apho wayekuncedisa ukufundisa-kodwa wahluleka ukuhlolwa kweYunivesithi yaseLondon. Ngenxa yoko, uWilfred waba ngumncedisi kwi-Dunsden - i-parish yase-Oxfordshire-phantsi kwelungiselelo elenzelwe ukuba u-Ostar ufundise u-Owen ngomnye umzamo kwiYunivesithi.
Nangona abavakalisi bahluke malunga nokuba u-Owen waqala ukubhala eneminyaka eyi-10/11 ubudala, ngokuqinisekileyo wayevelisa izibongo ngexesha lakhe eDunsden; Ngokuchasene, iingcali ziyavuma ukuba iincwadi ze-Owen ezithandekayo, kunye neBotany, esikolweni, kwaye ukuba yakhe ingongoma eyimbongo yayinguKeats.
Iingqungquthela zeDunsden zibonakalisa ukuqonda ngenceba ngokuphawulekayo kwimbongo yesilwaba sikaWilfred Owen, kwaye umlobi omncinci wathola izinto ezibonakalayo kwintlupheko nokufa ayeyisebenzela icawa. Enyanisweni, uWilfred Owen ebhalwe 'imfesane' wayedla ngokusondeza.
Inkonzo kaWilfred eDunsden isenokuba yayazi ngakumbi abahlwempuzekileyo nabanenhlanhla, kodwa ayizange ikhuthaze inqabileyo yecawa: kude nempembelelo yunina waqala ukugxeka inkolo yobuvangeli kunye nenjongo yecandelo elithile leencwadi .
Iingcamango ezinjalo zakhokelela kwixesha elilukhuni nelinxunguphalo ngoJanuwari 1913, xa u-Wilfred noDunsden abathandayo bebambene, kwaye-nokuba mhlawumbi ngenxa ye-Owen yaxhalaka. Washiya epareni, echitha ihlobo elandelayo ukubuyisela.
Ngeli thuba lokuphumla uWilfred Owen wabhala ukuba ngabagxeki bavame ukubiza igama elithi 'imbongo yemfazwe' yokuqala - 'Uriconium, Ode' - emva kokutyelela i-archaeological dig. Izidumbu zazingamaRoma, kwaye uOwen wachaza umkhosi wamandulo ngokubhekiselele kwiimpawu azibonayo. Nangona kunjalo, akazange akwazi ukufumana i-scholarship kwiprayuniyali kwaye ngoko wayehamba eNgilani, ehamba kwilizwekazi kunye nesimo sokufundisa isiNgesi kwisikolo saseBerlitz eBordeaux. UOwen wayemele ahlale eFransi iminyaka engaphezu kwembini, ngeliphi ixesha waqala ukuqokelela iingoma: kwakungakaze kushicilelwe.
Ngowe-1915: UWilfed Owen u-Enlist kwi-Army
Nangona imfazwe yabamba iYurophu ngonyaka ka-1914, ngo-1915 u-Owen wajonga ukuba ingxabano yanda kakhulu kangangokuthi wayeyidinga ilizwe lakhe, apho abuyele eShrewsbury ngoSeptemba 1915, ukuqeqeshwa njengabucala e-Hare Hall Camp e-Essex. Ngokungafani nabaninzi beemfazwe zokuqala, ukulibazisa kuthetha ukuba u-Owen wayeyazi kakuhle ingxabano ayengena kuyo, ehambele esibhedlele ngenxa yabalimala kwaye ebone ukubulawa kweemfazwe zanamhlanje kuqala; nangona kunjalo wayeziva ekhutshwe kwiziganeko.
U-Owen wathuthela kwisikolo seGosa e-Essex ngo-Matshi ka-1916 ngaphambi kokujoyina iMigodi yaseManchester ngoJuni, apho wayefakwe khona 'i-1st Class Shot' kwikhosi ekhethekileyo. Isicelo seRoyal Flying Corps sichithwa, kwaye ngoDisemba 30, 1916, uWilfred waya eFransi, ejoyina ii-Manchesters ngo-Januwari 12, 1917. Babebekwe kufuphi neBeumont Hamel, eSomme.
UWilfred Owen ubona ukulwa
Ileta kaWilfred ngokwakhe ichaza le mihla embalwa ilandelayo bhetele kunokuba nayiphi na umbhali okanye umbhali-mlando angenethemba lokulawula, kodwa kunelungelo lokuthi uOwen namadoda akhe babambelele phambili, kwaye iigobolondo zazingqongqoza. Emva kokuba esaphila, u-Owen wahlala ekhuthele kunye neManchesters, phantse ukutshiswa kweqabunga ngasekupheleni kukaJanuwari, ukuxhalabisa ngo-Matshi - wawela kwilizwe elonakaliswe yinqabileyo elingaphantsi kwe-Le Quesnoy-en-Santerre, wamfumana uhambo emva kwemigca esibhedlele - kunye nokulwa ngokulwa nomsindo eSt.
Quentin ezimbalwa kwiiveki kamva.
I-Shell Shock: UWilfred Owen eCraiglockhart
Kwaye emva kwalolu daba lokugqibela, xa uOwen ebanjwe ekuqhubheni, ukuba amasosha ayemxelela ukuba wenza ngokumangalisa; Ufunyanwe ukuba unobungqongqothela kwaye wabuyela eNgilani unyango ngoMeyi. UOwen ufikile kule ndawo, ngoku ngoku udumileyo, iSibhedlele se-Craiglockhart War ngomhla wama-26 kaJuni, isiseko esasemva kwe-Edinburgh. Kwiinyanga ezimbalwa ezalandelayo uWilfred wabhala ezinye zeengoma zakhe ezigqwesileyo, umphumo wezinto ezininzi. Ugqirha ka-Owen, uArthur Brock, wakhuthaza isigulane sakhe ukuba anqobe iigubungqele ngokusebenza kanzima kwiingqungquthela zakhe nokuhlela Iphephancwadi likaHydra, iCraiglockhart. Okwangoku, u-Owen wadibana nesinye isigulane, uSiegfried Sassoon, imbongi eyasungulwa esanda kupapashwa yimfazwe yaphefumlela uWilfred kwaye isikhuthazo sakhe samkhokela; i-Owen eya eSassoon ayikho into ecacileyo, kodwa loo yangaphambili yayiphuculwe ngaphaya kweetalente zokugqibela.
Iingqungquthela zeMfazwe ka-Owen
Ukongezelela, u-Owen wayechazwe ngokubhala ngokunyanisekileyo kunye nesimo sengqondo sabangewona amaqhawe abo bazukisa imfazwe, isimo sengqondo uWilfred asabela ngayo ngobushushu. Ukuqhubela phambili ukuxhaswa ngamaxesha okulwa namaxesha akhe okulwa, u-Owen wabhala iiklasi ezifana ne-'Anthem for Youth Destroyed ', imisebenzi ecebileyo kunye neentlobo ezininzi ezibonakaliswe ngokunyaniseka nokunyaniseka kwintolongo / amaxhoba, amaninzi awo ayenokuthi ayenze ngokuthe ngqo kwabanye abalobi.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba uWilfred wayengeyena yintliziyo elula - ngokwenene, ngezinye izihlandlo wayethetha ngazo - kodwa indoda iyayikhathalela umthwalo wejoni.
U-Owen usenokuba ngumntu obaluleke kakhulu ngaphambi kwemfazwe - njengengcatshulwa ngamagama akhe ekhaya esuka eFransi - kodwa akukho nto iyenzela yona kwimfazwe yakhe.
U-Owen uyaqhubeka nokubhala ngexesha elithile kwi-Reserves
Emva kokuba ukhululwe ngoNovemba, uWilfred wasebenzisa uKrisimesi 1917 kunye ne-Manchester's reserve battalion eScarborough. Bekukhona apha wafunda phantsi koMlilo, i-akhawunti yokuqala yokufumana amava amaninzi aseFransi kwiMfazwe Enkulu, kunye nefuthe elinamandla kwi-Owen yokubhala. Siyabonga kuSassoon, u-Owen naye wadibana nabanye abalobi abaninzi kwiinyanga ezili-1917 ezidlulileyo, kuquka uRobert Graves - imbongi yecala - kunye noHG Wells, umbhali wenzululwazi eyaziwayo. Ngo-Matshi 1918 u-Owen wathunyelwa kuMyalelo weMntla eRipon, apho wachitha ezininzi zeeyure ezingabikho emsebenzini ekubhaliseni i-attic erentiweyo; ngeli xesha, elide ladalela uWilfred wagwetywa ukuba ufanelekile ukukhonza kwakhona ngoJuni, iinqanaba kunye neenyanga e-Craiglockhart njenge-Owen eyona nto ibonakalayo kwaye ibalulekile.
Naphezu kwenani elingaphantsi kweempapasho, iingqungquthela zika-Owen sele zikhangele ingqalelo, zikhuthaza abaxhasayo ukuba bacele izikhundla ezingabikho zokulwa naye, kodwa ezi zicelo zacinywa. Kunokungabaza ukuba uWilfred wayenokuwamkela: iincwadi zakhe zityhila umthwalo wembopheleleko, ukuba kufuneka enze umsebenzi wakhe njengombongi kwaye ubone ingxabano kumntu, uvakalelo olwenziwe lukhuni ngenxa yengozi yaseSassoon evuselelwe kwaye ibuyele phambili. Kuphela ngokulwa uOwen angayifumana intlonelo, okanye aphunyuke ngokulula kweentlanzi, kwaye kuphela irekhodi elikhukhumele imfazwe liza kumkhusela kubaxhasi.
U-Owen Ubuyela Kwi-Front kwaye Ubulawa
UOwen wayebuyele eFransi ngoSeptemba - kwakhona njengomphathi wenkampani - kwaye ngoSeptemba 29 wathabatha umpu wamashishini ngexesha lokuhlaselwa kwiBeaurevoir-Fonsomme Line, apho wawanikezelwa uMnqamlezo woMkhosi. Emva kokuba ibhethali yakhe yahlala ekuqaleni kukaOktobha u-Owen wabona kwakhona isenzo, inyunithi yakhe esebenza malunga nomsele weOise-Sambre.
Ekuqaleni kwangoNovemba 4 u-Owen ukhokele umzamo wokuwela umnqanawa; wahlaselwa waza wabulawa ngumlilo.
Ukufa kuka-Owen kwalandelwa ngenye yeendaba ze-World War One ezinamabonakaliso: xa i-telegram yokubika kwakhe kwadluliselwa kubazali bakhe, iintsimbi zebandla zendawo zavakala ukuba zivakalise ukubhiyozela i-armistice. Iqoqo leengoma ze-Owen ngokukhawuleza zadalwa nguSason, nangona iinguqu ezininzi ezahlukeneyo, kunye nomlindi unzima ekusebenzeni oko kwakubhalwe ngu-Owen kunye nezinto ezikhethiweyo ezikhethiweyo, ezikhokelela kwii-editions ezimbini ezintsha ekuqaleni kwawo-1920. Umshicileli ocacileyo msebenzi kaWilfred unokuba yi-Jon Stallworthy's Poems and Complete Fragments ukususela ngo-1983, kodwa zonke zivakalisa ukunyaniseka kukaOwen.
Isibongo asikho wonke umntu, kuba ngaphakathi kwe-Owen idibanisa iinkcazo ezicacileyo zobomi bombhobho - i-gas, iilusi, udaka, ukufa-ngokungabikho kokuzukiswa; Izihloko eziphezulu ziquka ukubuya kwemizimba emhlabeni, esihogweni nasezantsi. Iingqungquthela zikaWilfred Owen zikhunjulwa njengokubonakalisa ubomi bokwenene belijoni, nangona abagxeki kunye neembali-mlando bephikisana nokuba ngaba wayeyinyanisekile okanye ayethuswa kakhulu ngamava akhe.
Ngokuqinisekileyo wayenesihe, igama eliphindaphindiweyo kulo mbhalo kunye neetekisi kwi-Owen ngokubanzi, kwaye isebenza njengokukhubazeka, egxile kwiinjongo kunye neengcinga zamajoni ngokwawo, unikeze umzekeliso ocacileyo wokuba kutheni.
Iingqungquthela zika-Owen ngokuqinisekileyo zikhululekile ekubukrakra okukhoyo kwiimbali ezininzi zeembali-mlando ezichaseneyo, yaye ngokuqhelekileyo uyavuma ukuba nguye owona uphumelele kakhulu, kwaye ubhetele, imbongi yembambano yemfazwe. Isizathu sokuba kutheni sifumaneke 'kwisiqalo' sesibongo sakhe, apho i-fragment edibeneyo ifumaneka emva kokufa kukaOwen: "Nangona kunjalo, ezi zizwe azikho kwesi sizukulwana, akukho nto iqinisekisa ngayo. Yonke into imbongi inokuyenza namhlanje kukulumkisa. Yingakho iiPolisi zinyaniso kufuneka zithembeke. " (UWilfred Owen, 'IsiNgesi')
Eyaziwayo intsapho kaWilfred Owen
UBawo: Tom Owen
Umama: uSusan Owen
USF GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Ukuvulwa kweMvume yokuSetyenziswa koManzi eScuba Diving Certification
Iingqungquthela ezi-7 zePiano yeBass
I-Crescent Moon Symbol kwiiflegi zeSizwe